Cartel lehibe: ecommerce ho an'ny artista | Martech Zone
Cartel lehibe: ecommerce ho an'ny artista
Alahady 26 Janoary 2014 Alahady 26 Janoary 2014 Douglas Karr
Niorina tamin'ny 2005 mba hanampiana ny mpiara-manorina azy ireo hivarotra ny entan'ny tariny, Cartel lehibe izao dia fonenan'ny mpanakanto tsy miankina 400,000 manerantany. Ny sehatra ecommerce ataon'izy ireo dia natsangana manokana hanampiana ireo mpamorona hamorona vokatra an-tserasera. Ity misy horonantsary iray avy amin'ny iray amin'ny mpanjifany, Ho ela velona ny honina, mpamorona akanjo.
Cartel lehibe manolotra ireto tombontsoa sy fiasa manaraka ireto:
Fametrahana haingana - Makà fivarotana tsotra amin'ny Internet afaka minitra vitsy.
Mora ampiasaina - manome sehatra tsotra izay tsotra ampiasaina izy ireo.
Manan-tsaina - fitantanana sy fitantanana filaminana.
marika - Tsotra sy mandroso fanaingoana tsy mila kaody. Ny mpampiasa dia afaka misafidy lohahevitra efa vita ary hamolavola mora foana ireo sary, loko ary endritsoratra.
Sehatra manokana - Ampiasao ny sehatra rehetra anananao hanomezana URL anao manokana.
Tantano ny filaminanas - faritra fitantanana kaomandy ary mailaka fanamafisana ny baiko azonao ampanjifaina.
Search engine optimised - Ny fivarotana dia haingo ho an'ny motera fikarohana, miorina amin'ny tolo-kevitr'i Google.
Stats sy analytics - Araho maso ny asan'ny fivarotana sy ny fitomboany miaraka amin'ny statistika dashboard amin'ny fotoana tena izy ary ny fampidirana Google Analytics.
Kaody fihenam-bidy - Ny kaody fihenam-bidy dia manolotra fomba isan-karazany amin'ny varotra vokatra vaovao, hampiroborobo ny fivarotanao ary manome valisoa ireo mpanjifa tsy mivadika.
Lahatsary nomerika - amidio zava-kanto nomerika, mozika, horonan-tsary, endritsoratra, sary, eBooks, ary vokatra hafa azo sintomina miaraka amin'ny serivisy rahavavinay. Pulley.
Amidio amin'ny Facebook - Ampio ny fivarotanao amin'ny pejy Facebook ary mampifandray ny mpankafy anao amin'ny vokatrao amin'ny alàlan'ny fampiharana Facebook mitambatra.
Fanapahana amin'ny finday - amidio mivantana ny entanao avy amin'ny iPhone amin'ny Fampiharana Cartel lehibe.
Tags: cartel lehibefivarotana fampidinana nomerikaecommerceecommerce ho an'ny artistapulleymivarotra zavakanto an-tseraseramivarotra lamaody an-tserasera